चतुर ओलीको चतुर चाल, बालकोटबाटै फाले अस्त्र ! - Compaq News
चतुर ओलीको चतुर चाल, बालकोटबाटै फाले अस्त्र !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा तथ्यलाई स्वीकारे र अर्को भविष्यवाणी गरे । उनले नेकपा एमाले एकतिर र पाँच दलीय गठबन्धन अर्कातिर भएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आफूहरु प्रतिकूल हुने बताए । अर्को, गठबन्धनको अन्तिम शक्ति राष्ट्रियसभासम्म हुने भन्दै भत्कने भविष्यवाणी गरे ।